January 2012 – Everybody Read TChen
ကဲလာပြန်ပါပြီ တီချမ်းကို ဟင်းချက်တာပိုကြိုက်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် တီချမ်း စတိုင်လ်အတိုင်း ပုံလှလှလေးတွေပြင်ဆင်ပုံ အဆင့်ဆင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးတွေနဲ့ ဒီတပတ်အတွက် လုပ်ဖြစ်တာကတော့ အသုပ်စုံပါ။ အမှန်က ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မောင့်အတွက် မွေးနေ့အနေနဲ့ လုပ်ပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်လူလဲ သိပ်များများစားစားမပါပါဘူး။ အိမ်က ကလေး နှစ်ကောင် (မွေးစား ဝမ်းမနာ သားနဲ့ သမီးရယ်) သူငယ်ချင်း ဘလောခ်ဂါ နှစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ လွယ်ကူစားမြိန် နဲ့ ခရမ်းနွယ်တို့လောက်ပဲပါပါတယ်။ (ကဲကြေငြာပေးလိုက်ပြီနော်….တီ့ဆီကနေ တဆင့် လူဝင်များပြီး ဟစ်တက်ပြီသာမှတ်) အဓိကကလဲ သူတို့နှစ်ယောက်ပဲ လုပ်သွားကြတာပါ။ တီကတော့ ဆရာကြီး လုပ်တာပေါ့။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုလုပ်၊ ဘယ်ဟာက ဘယ်လောက်ထည့် ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဘယ်လိုနယ် ဘာဘာညာညာပေါ့။ အဓိကကတော့ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပါတယ်။ အဲ့တာလဲ ဘလောခ်ဂင်းမှာ အရေးကြီးတာကိုးနော်။ အဓိက က တီ့ဟင်းချက်တာတွေကို လူတွေကြိုက်ကြတာ အဲ့လို ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် စနစ်တကျ ဖော်ပြတတ်လို့လို့ထင်ပါတယ်။ ထားပါလေ။မောင့်မွေးနေ့ အတွက် လုပ်ကျွေးဖြစ်တဲ့ လက်သုပ်စုံလေးကို ကြည့်ကြရအောင်နော်။ အော်မေ့တော့မလို့ ဟက်ပီးဘလိတ်တက် ဘတ်သ်ဒေးပါမောင်။
ဒီပထမဆုံးပုံကို သိပ်အာရုံမထားကြပါနဲ့ တီ ဘလောခ် ပိုစ့် အသစ်တင်ရင် တခြား ဘလောခ်ဂါတွေရဲ့ ပေဂ်ျ့တွေမှာ အရင်ဆုံးတင်တဲ့ ပုံနဲ့ ပိုစ့်က ပေါ်တတ်တာ သတိထားမိလို့ ပုံလှလှလေးတွေ အရင်ရွေးပြီးတင်ထားတာပါ။ တဆင့်ခြင်းပုံတွေက အောက်မှာ……
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အသုပ်ဆုံ ဆိုနာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ခုံခုံမင်မင်စားလေ့ရှိတဲ့ သွားရေစာ တမျိုးပါ။ တီတို့ဆိုရန်ကုန်မှာနေတုံးက နေ့လည်ဆို
နန်းကြီးသုပ် စတာတွေ တခုမဟုတ်တခု ထွက်စားနေကြပါ။ (တလက်စတည်း အကုန် အရင်က ချက်ဘူးတာ လင့်ခ်ပေးလိုက်မယ်နော်) ရန်ကုန်မှာတော့ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အဲ့တာတွေ ရှိတော့ စားရလွယ်တာကိုးနော်။ တီတို့နေတဲ့ မြေနီကုန်း စမ်းချောင်းဆို ပိုတောင်ပေါသေး။ နာမည်ကြီး မုန့်ဟင်းခါးတွေလဲ အဲ့နားမှာ များတာကို။ ခုတော့ ဒီမှာက စားချင်ရင် ကိုယ်တိုင် တခုတ်တရ လုပ်စားပါမှ စားရတာပါ။ လုပ်လဲလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ မလုပ်ချင်ရင် မစားရဘူးကိုးနော်။ စာဘတ်သူတယောက်က လာမေးပါတယ်။ ဘာလုပ်လဲတဲ့။ ဟင်းချက်တာတွေက မိုက်တော့ အလေ့အကျင့်ရှိတယ်ထင်တယ်နော်တဲ့။ အမှန်က တီဒီမှာ လာနေဖြစ်မှ အဲ့တာတွေအကုန် စချက်ဖြစ်တာပါ။ အို ထမင်းဟင်းကအစပေါ့။ အရင်က အိမ်မှာဆို ဘာအမွှေးမှ မလောင်အောင် မင်းသမီးလိုနေတာ။ စားပြီးတဲ့ ပန်းကန်တောင်မဆေးရဘူး။ ညီလဲ ရှိ အိမ်ဖော်တွေလဲ ရှိဆိုတော့။ ရေတောင် သောက်ချင်ရင် သူသူရေ (အိမ်ဖော်နာမည် ဥပမာ) လို့အော်လိုက်ရုံပါပဲ။ ခုမှ ဒီလဲရောက် တိုင်းတပါးမှာလဲ မိဝေးဖဝေးနေနေရ၊ လင်ကလဲရ ဆိုတော့မှ အိမ်အလုပ်ဆိုတာတွေ လုပ်ရတာ။ ဒါတောင် မောင်က လိမ္မာလို့ တီ သိပ်မလုပ်ရပါဘူး။ အိမ်မှာဆို ဟင်းချက် ထမင်းချက် အဝတ်လျှော် မီးပူတိုက် က မောင်လုပ်တာ။ အိမ်ရှင်းတာကတော့ မိတ်လုပ်တာပေါ့။ ထားတော့။ ပြောချင်တာ ဒီရောက်မှ အဲ့လို အချက်အပြုတ်တွေ စလုပ်ဖူးတာပါ။ အရင်ကတော့ အမေလုပ်တာမြင်ဘူးတာပေါ့ အဲ့လောက်ပါပဲ။ တီကို ကတော်တာဖြစ်မယ်။ တချို့တွေ ပြောသလိုလေ လက်ဆိပ်ရှိတယ်ခေါ်တာပေါ့ တခါမြင်ဘူးရင် ချက်တတ်ပြီ။ မမြင်ဘူးရင်လဲအမေတို့အဒေါ်တို့ ဖုန်းဆက်မေး သူတို့ပြောတဲ့ အတိုင်းချက်လိုက်ရင်ဖြစ်သွားတာပဲ။ သတိထားမိပါလိမ့်မယ် တီ့ အချက်အပြုတ်တွေမှာ ဘယ်တုံးကများ အသားက ဘယ်လောက်သား အချိုမှုန့်ဆားက စားပွဲတင်ဇွန်း ဘယ်နှဇွန်းဆိုတာမျိုး ရေးဖူးလို့လဲ။ (ရေးနေသူများကို မကောင်းမပြောပါ တီက ပိုတော်တာကိုသာပြောလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်) ငှဲငှဲငှဲ…….ဒီလိုပဲ ကြည့်ထည့်လိုက် တီ့ မိုတို ကိုက လွယ်ကူမြန်ဆန် စားကောင်းအရသာရှိပဲလေနော်။ ဆား အချိုမှုန့် တို့ ဟင်းချက်ရင် ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် တို့ဆိုတာက ထည့်သာထည့် ကြိုက်သလောက်ထည့် လိုရင် ထပ်ထည့် များသွားရင် ရေရောပဲလေနော်။ လွယ်မှလွယ်။ မလွယ်ဘူးလား သိပ်လွယ်တာပေါ့နော်။ ကဲ တီချမ်း ထုံးစံအတိုင်း လျှာရှည်နေတာနဲ့ လိုရင်းမရောက်တော့ဘူး။ တီ့ နောက်မိုတိုတခုကလဲ လျှာရှည်လေ တွေ့ရှိလေဆိုတော့ ရှည်ရမယ်လေနော်။ ကဲလာပြီ။ အသုပ်စုံ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အသုပ်စုံကလဲ လုပ်တော့သာလွယ်တာ အစုံပလုံရအောက် ရှာရတာ သိပ်ခက်တယ်။ အမှန်က ငယ်ငယ်က စပ်ကော့လပ်ကော့ဈေးမှာ စားခဲ့သလို ကျောက်ပွင့်လေးတွေ ရေညှိလေးတွေတောင် ထည့်ချင်သေးတာ ခုတော့ လဲ သူများနိုင်ငံမှာ ဆိုတော့ ရှိတာလေးနဲ့ ဖြစ်သလိုပဲပေါ့နော်။ ဒါတောင် တီ့ဖြစ်သလိုဆိုတာက အများစုရဲ့သေချာစီစဉ်မှုထက်တော့ သာမှာသေချာတယ်။ တချို့လူတွေက ဖြစ်သလိုဆို တကယ့်ကို ဖြစ်သလိုလုပ်တတ်ကြတာကလား။ ထားတော့။ နာမည်တော့ မပြောတော့ဘူး တော်ကြာ စိတ်ဆိုးနေမှာစိုးလို့။
ကဲ တီ့အသုပ်စုံက တကယ်ကော စုံရဲ့လား ဘာတွေ ပါသလဲ ကြည့်ကြရအောင်နော်။
ပုံ ၁-၂-၃ အစီအစဉ်လိုက်အတိုင်း သွားမယ်နော်……ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလှီးရယ် သင်္ဘောသီး ဓါးနှုတ်စဉ်းလေးရယ် တိုဟူးရယ်ပါ။ လှီးတာချွတ်တာတွေအတွက် ခရမ်းနွယ်ကို ခရက်ဒစ်ပေးချင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို တရုတ်သိုင်းလောက က ဓါးသိုင်းသမကြီး အတိုင်းပဲ ရွှတ်ရွှတ် ဒုတ်ဒုတ်နဲ့ လှီးသွားတာ တော်ကြာ စတီဗင်ချောင်းများသိသွားရင် သူ့နောက်ကားတွေမှာ ထည့်ရိုက်နေမှာ စိုးရပါတယ်။ (ဝါးခြမ်းပြားကြီးကြီးနဲ့)
ထမင်းလုံး ငရုတ်ဆီနယ်ပါ၊ အမှန်က ချီးပမ်းချဉ် နဲ့ နယ်ရမှာ နီနီလေး (အဆိုတော်မဟုတ်) အရောင်ရအောင်လေ ခုတော့ မရှိတော့ ရှိတဲ့ တီ ဖက်ထုပ်တွေခေါက်ဆွဲတွေစားရင် ထည့်စားတဲ့ ငရုတ်သီး ဆီချက် ချက်ထားတာနဲပ နယ်ပလိုက်တယ် လှလှလေး လုံးပေးတာက လွယ်ကူစားမြိန်ပါ။ ဆီချက်ကတော့ မောင့် လက်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တလောကလုံးမှာ ဆီချက်ကို ဒီလို လှလှ မွှေးမွှေး မတူးအောင် ကြော်နိုင်တာ တီချမ်း ချစ်လင် ယောက်ျား အိမ်သား မောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကတော့ သခွားသီး ခုနက ပြောတဲ့ အော်မေ့ ဓါးသမ ခရမ်းနွယ်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အံမယ် ခုမှသတိထားမိတယ် သူ့နာမည်က တကယ့် သိုင်းဝတ္ထူတွေထဲက နာမည်ဖြစ်နေပါ့လား။
အားလူးပြုတ် အခွံနွှာချေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နံနံပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ သုပ်ပါတော့မယ်။ အော် မေ့သွားလို့ ပြန်လာအက်ဒစ်ပြီး ထပ်ရေးရတယ်။ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်၊ ဆီချက်၊ မန်ကျည်းမှည့်ရည် စတာတွေနဲ့ ဇလုံထဲတခုချင်းစီ နည်းနည်းစီ ထည့်ပြီး အကုန် နယ်ပါမယ်။ ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲတော့ မပြောတော့ဘူးနော်။ တီချမ်းစာဘတ်ရင် လူလည်ချည်းပေါ့။ ကြည့်ကျက်သာထည့် များသွားရင် ခေါက်ဆွဲတွေ အစာတွေ ထပ်ထည့်၊ ပေါ့နေရင် ငံပြာရည်ထပ်ထည့်။ သုပ်တာများသွားရင် ဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ် ဝေလိုက်။ မဟုတ်ရင် အနီးအနားမှာ နေတဲ့ တခြား ဘလောခ်ဂါတွေ ခေါ်ကျွေး။ ကဲ မပိုင်လား။
နယ်တဲ့ အခါမှာ လက်ကြားလေးတွေထဲက ထွက်တဲ့ အထိ တဗြိဗြိနဲ့ နယ်သာနယ်ပါ။ အဲ့တာမှ ကောင်းတာ။ ရဲဘော်တို့ ခုတို့ လုပ်နေတာ အသုပ်စုံ။ ဒါ လှနေ နုနေ ရမယ့် အချိန်မဟုတ်။ နယ်တာကလဲ လွယ်ကူစားမြိန်ပါပဲ။ အဲ့တော့ စာဘတ်သူက တီချမ်းဘာလုပ်သလဲမေးချင်မယ်။ အဲ့ဒီ ၃ ယောက်ကို ထောင့်စေ့အောင်ခိုင်းနေပါတယ်။ အံမယ် ၃ ယောက်လုံး မခိုမကပ်ဘဲ အမြန်ပြီးအောင် ခိုင်းနိုင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်မှတ်လို့ တီချမ်းမို့လို့သာပေါ့။
ဒါလေးတွေကတော့ ပုံလှလှထွက်အောင်ကော ပရယ်စင်တေးရှင်းကောင်းအောင်ကော တခါ အပြင်သွားတုံးက တွေ့လို့ တမင်ကို အသုပ်စုံလုပ်စားရင် သုံးရအောင်ဆိုပြီး ဝယ်ထားတဲ့ ဘူးပါ။ အဲ့တာ ထုတ်ပေးဖို့ မောင့်ကို ပြောတုံးကတောင် သတ်ရတော့မလို့။ သူက တလောက ရေကြီးတော့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းထားတာ အကုန်လျောက်ပြီးတော့လေ။ ပြန်ရှာရမှာပေါ့။ ပြောလိုက်တယ် ရှင် သေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားတာ ကျုပ်တွေ့တယ် သွားယူချေ လို့ ဘယ်ရမလဲ တီချမ်းပဲဟာနော်။ လင်နေစ ကြောင်သေမှလေနော်။ ကြောင်ကော ကျားကော ကျားသစ်ကော ဆင်ကော ခြင်္သေ့ကော အကုန်သေစေရမယ်။ နောက်မှ လင်နိုင်နည်း ၁၀၀ ဆိုတာကို စာအုပ်နဲ့ ကိုရေးပြီး ထုတ်အုံးမယ်။ အားပေးကြအုံးနော်။ ဘေးပုံကတော့ ခေါက်ဆွဲတွေပါ။ ပဲကြာဇံ နဲ့ ဆန်ကြာဇံ ကို ၇-၁၁ ကနေ ဝယ်ပြီးတော့ ရေနွေးဖျော်ပါတယ်။ ပဲကြာဇံက ဖျော်ပြီးတာနဲ့ ရေအေးနဲ့ဆေးပါ မဟုတ်ရင် ထွေးသွားပါမယ်။ ဆန်ကြာဇံကတော့ ပြုတ်ပြီးတော့ ပဲငံပြာရည်အနောက်နဲ့နယ်ပါသေးတယ်။ လွယ်သူစားမြိန်ပါ။ ခေါက်ဆွဲကတော့ တရုတ်နှစ်ကူးရင် မှိုတွေကျိုးချိုက်တွေနဲ့ ကြော်စားတဲ့ သက်ရှည်ခေါက်ဆွဲကို ပြုတ်လိုက်တာပါ။ လွယ်တယ်နော်။
ခုနက ဇလုံက သုပ်တာ ၅ ယောက်စာပါ။ ပြီးတော့ ပွဲပြင်ပြီးတော့ နံနံပင်အုပ်လိုက်တော့ စားချင်စဖွယ် အသုပ်စုံရတာပေါ့။ အမှန်က ဒေါ်ရီတာ အရင်တခေါက် ဘန်ကောက်လာလည်ကတည်းက လုပ်ကျွေးကြဖို့ပါ။ နောက်တော့ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ရှမ်းခေါက်ဆွဲပဲ ချက်ဖြစ်သွားလဲ မသိဘူး။ အော် ဟင်းခါးလေးလဲ မမေ့နဲ့နော်။ တီတို့ကတော့ အလွယ် အိမ့်စည်းစိမ် ၃ ထုပ်ကို ရေဆူဆူမှာ တည်ပြီးတော့ ဘူးသီး နုနုလေးတွေစိတ်ထည့်။ ပဲကြာဇံ နည်းနည်းခပ်၊ ပြီးတော့ ကြွက်နားရွက်မှိုလေးတွေ တောက်လိုက်တော့ ဟင်းခါး ပူပူလေးမရပါလား။ မိုက်မှမိုက်ပဲ။ မနေ့က မိုးကလဲ အုံ့တုံ့တုံ့ ဆိုတော့ ကောင်းမှကောင်း။
ဒါကတော့ အပြန်မှာ ပါဆယ်ယူတဲ့ လွယ်ကူနဲ့ ခရမ်း သိုင်းသမ တို့ အတွက်ပါ။ လက်က ခရမ်း ရဲ့ လက်လေ။ တွေ့တယ်မှ ဓါးကိုင်တဲ့ လက်ဆိုတာ…………….
ကဲ အားလုံးကိုချစ်တယ်နော် မောင့်မွေးနေ့လေး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြီးမြောက်သွားတာ ကျေးဇူးပါ။ ပျော်စေပျက်စေ ကလက်စေ ရေးတာမို့လို့ စိတ်မဆိုးရ။ ဆိုးရင်လဲ ဘာမှ မတတ်နိုင် ရေးတာက ရေးပြီးပြီ ဆိုးရင်လဲ လူဆိုးမကြီးတွေပဲဖြစ်မှာ။
ဒစ်စနေရဲ့ မင်းသမီးတွေအကြောင်း ရေးဖို့ သုတေသန လုပ်နေပါတယ် မျှော်………..
Posted on January 30, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အသုပ်များ18 Comments on တီချမ်း ဆရာလုပ်တဲ့ အသုပ်စုံ
မနေ့ညက ဂျင်မီ ရဲ့ စာအုပ် မသစ်တသစ်လေးတအုပ်ကို ဘတ်မိတယ်။ အရင်ကလဲ ဂျင်မီစာလေးတွေ ဘာသာပြန်ခဲ့တာရှိပါတယ် ပြတင်းပေါက်က ကောင်လေး၊
ပြတင်းပေါက်က ကောင်မလေး နဲ့ ပြတင်းပေါက်မှ စောင့်ကြည့်သူလေးများ ဆိုတာတွေရယ်၊
နောက် ပေးစာလေးတွေ တော်တော်များပါတယ်။ အခုလဲ ဘတ်မိတဲ့ စာအုပ်လေးတအုပ်ကို ပြန်ရေးပြချင်ပါတယ်။ တူတူခံစားကြည့်ကြရအောင်နော်။
ဒီနေ့ ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကတိကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်လို့ ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ဒါက ငါ့အတွက် တယောက်ထဲ ဒီလောက်ဝေးဝေးကို ပထမဆုံးသွားဖူးတာပါ။
နေ့လည်စာကိုတောင် ကမန်းကတမ်း မြိုချလိုက်မိတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ….ဖြူတုတ်က စောင့်ရှောက်မှာပါ မေမေ”
ဖြူတုတ်လေးကတော့ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ ရှေ့ကနေ ပြေးသွားနေလေရဲ့။
ငါတို့ အကွေ့တကွေ့ ကွေ့လိုက်တော့
ဒီလျှို့ဝှက်လမ်းလေးကိုသိတာ နင်ရယ် ငါရယ် ဖြူတုတ်ရယ်ပဲနော်
ဆိတ်အုပ်စုလေးက တခါတခါ ခေါင်းငုံ့ပြီး မြက်တွေကို မဲစားနေတတ်တယ်
တခါတခါကျတော့ မြက်တောထဲမှာ ပြေးလိုက်လွှားလိုက်နဲ့သဘာဝ သရုပ်ကိုဖော်နေသလိုပဲ
ဖြူတုတ်က အရင်ကဆို တချိန်လုံး ဆိတ်ကလေးတွေနောက်ကို ပြေးလိုက်တတ်လို့
သူတို့တွေ တပဲပဲနဲ့ ကြောက်ပြီး လေးဘက်လေးတန်ကို လျောက်ပြေးလို့ အော်လိုက်ကြတာဆိုတာလေ။
ခုတော့ သူလဲ ငါ့နားမှာ လိမ်လိမ်မာမာလေး လျောက်ရမယ် ဆိုတာ သိနေသလိုပါပဲ။
နွေဆို ငါတို့အမြဲ ရေကူးနေကျစမ်းချောင်းလေးကိုမှတ်မိသေးလား
ကမ်းဘေးနှစ်ဘက်က ပရုပ်ပင်အရွက်တွေက စမ်းချောင်းထဲတောင်ကျနေပြီသိလား
မနှစ်က ငါတို့နှစ်ယောက် ချောင်းထဲမှာ တိတ်တိတ်လေး ခိုးလွှတ်လိုက်တဲ့ ရွှေငါးလေး ၃ ကောင်လေ
အခု သူတို့ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးနော်။
စမ်းချောင်းထဲမှာတော့ ဘဲရုပ်ဆိုးလေးတကောင် တကောင်တည်း အထီးကျန်ကျန်ကူးနေတယ်
ဘာကိစ္စ ကိုမဆို ငါက အဆိုးဘက်က အမြဲစဉ်းစားတတ်တယ်
ဘယ်ကိစ္စကိုမဆို အမြဲ အကောင်းဘက်ကတွေးတတ်တယ်
တကယ်လို့ နင်သာ ငါ့အနားမှာရှိရင် ငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတော့
“ဘဲကလေးက သူရဲ့ နွေးထွးတဲ့ အိမ်ကလေးကို ပြန်ရောက်မှာပါ၊ အများကြီးလျောက်မတွေးပါနဲ့” လို့ပြောမှာသေချာတယ်နော်။
ဒါပေမယ့် ငါကတော့ အဲ့လိုပဲ တောရောက်တောင်ရောက် လျောက်လျောက်တွေးနေတတ်တယ်။ ရပ်လဲရပ်လို့မရဘူး။
လေလေးတသိမ့်သိမ့်တိုက်လာတော့ ပန်းပွင့်ဖတ်လွှာလေးတွေ ငါ့ကိုယ်ပေါ်ကျလာကြတယ်။
အရင်တုံးက မေမေ့ကို ခဏခဏမေးချင်မိပေမယ့် အမြဲလိုလို မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
မေမေတို့ စက်ရုံက လုပ်ရင်းပျက်သွားတဲ့ မွှေးပွ ဝက်ဝံ ရုပ်လေးတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့လေ။
သူတို့တွေလဲ တိတ်တိတ်ကလေး ကမ္ဘာတခုဖွဲ့ထားကြမလားမသိဘူးနော်။
မပျက်တဲ့ ဝက်ဝံ ရုပ်လှလှလေးတွေ ကိုပေးမဝင်တဲ့ ကမ္ဘာလေးလေ။
ငါတို့တွေကကော ဘုရားသခင် လုပ်ရင်း မတော်တဆပျက်သွားတဲ့ ကလေးလေးတွေလားဟင်?
တကယ်လို့ အရုပ်ဆိုင်လေးထဲက ယုန်ရုပ်လေးတွေ ထွက်ပြေးဖို့ တူတူဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုပါစို့…
သူတို့ ထွက်အပြေးချင်ဆုံးက ဘယ်နေရာများလဲ?
ငါကတော့ နင်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ ယုန်ရုပ်အမဲလေးကို ကျောင်းတက်တိုင်းယူသွားတယ်။
တခါတလေ ဆို သူ့ကို နင့်ထိုင်ခုံလေးပေါ်ပေးထိုင်ထားတာပေါ့။
ငါတို့နဲ့ တူတူ စာသင်ကြတယ်လေ။
တကယ်လို့ ဝက်ကလေးကို မြေအောက်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ကလေးတလုံးဆောက်ပေးရင်
မေမေကတော့ ငါ့အခန်းလေးက ဝက်သိုက်လိုပဲ ရှုပ်ပွနေတယ်လို့ ပြောတာပဲ။
ဒါပေမယ့် ငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့ တချိန်လုံး ငါ့အခန်းဝက်သိုက်ကလေးမှာပဲ ပုန်းနေ ဆော့နေရတာကိုကြိုက်ကြတာကိုးနော်။
တကယ်လို့ ဝက်သိုက်ကသာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆို ဘယ်လာချစ်စရာကောင်းပါတော့မလဲလေ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က ခေါင်မိုးအောက်ကြားထဲမှာ
ငှက်ဖေဖေ နဲ့ ငှက်မေမေက နေ့တိုင်း တီတီတာတာနဲ့ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ရှုပ်နေလိုက်ကြတာ
မနေ့ကတော့ ခေါင်းမွှေးပြောင်ပြောင် ငုတ်စိလေးတွေနဲ့ ငှက်ပေါက်လေးနှစ်ကောင်ကို တွေ့ရတယ်
နောက် ကျောင်းရာသီရောက်ရင် ကျောင်းမှာ ကပွဲလုပ်ကြတော့မယ်။
ဒီတခါ ငါ့ကို သစ်ပင်ထပ်မလုပ်ခိုင်းပါစေနဲ့လို့တော့ ဆုတောင်းတာပဲ။
အဲ့တာဆို ပြေးလိုက် ခုန်လိုက်နဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့ လုပ်ရမှာပဲ။
ငါက ယုန်လေးလို ရှက်ကြောက်တတ်သလောက် နင်ကတော့ ခြင်္သေ့ကြီးလို ရဲရင့်တယ်နော်။
ဘာလို့များ ခြင်္သေ့လေးက ယုန်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းလုပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့တာပါလိမ့်။
နင့်အကိုက ၆ နှစ်သားကတည်းက ၆မီတာ မြင့်တဲ့ ဘုတ်ကနေ ဒိုင်ဗင်ထိုးရဲတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်နော်။
အခု ကျောင်းက ရေကူးအသင်းမှာ ငါပါခွင့်ရခဲ့ပြီဟ။
ဆရာက ငါဖားကူးကူးတာ သိပ်လှတယ်လို့ ချီးကျူးတယ်လေ။
အဲ့တာ နင်သင်ပေးထားတာလို့ ငါဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားပြီးဖြေလိုက်တာပေါ့။
သူတောင် အရပ်နည်းနည်း ပိုထွက်လာပြီ။
အရင်တခေါက် အားကစားပြိုင်ပွဲတုံးက သူက အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ ပထမလေ။
ငါဝမ်းသာလွန်းလို့ အားပေးတာ လည်ချောင်းတောင်နာတယ်။
အရင်က နင်တို့ မောင်နှမတွေ ပွေ့ပွေ့ဖက်ဖက်လုပ်ကြရင်
အား… အီး… ရွံစရာကြီးလို့ ငါအမြဲ ရယ်ခဲ့တာလေ။
အမှန်ကတော့ ငါလဲ စောစောကတည်းက နင်တို့နဲ့ တူတူ
နွေးနွေးထွေးထွေး ချစ်ချစ်ခင်ခင် တူတူ ပွေ့ဖက်တတ်အောင်သင်ခဲ့ရမှာနော်။
ဒီလမ်းမြောင်လေးက ကြည့်လိုက်ရင် ဖွားဖွားအိမ်ကို သွားတဲ့ လမ်းလေးနဲ့ သိပ်တူတယ်
ဖွားဖွားတောင် အရင်တပတ်က ရေချိုးခန်းထဲမှာ ချော်လဲသေးတယ်လေ။
ဖိုးဖိုးရဲ့နားလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မကြားရတော့ဘူး။
ငါ သူနဲ့စကားပြောတိုင်း အော်အော်ပြောနေရတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လဲ ကြက်အော်တာ ဘဲနားမလည်ပါပဲဟာ။
ငါ့အမ ဒီနှစ် အဆောင်မှာ ဘောဒါ သွားနေရပြီဟ။
အိမ်မှာ ကလေးဆိုလို့ ငါတယောက်ပဲကျန်တော့တာ
မေမေလဲ ခုတလော ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူး
အလုပ်ကပြန်လာတာနဲ့ TV ဖွင့်တော့တာပဲ
သူ့ ဗိုက်ကြီးလဲ တနေ့တခြား ပူပူလာပြီ
နင်ချစ်တဲ့ ကြွက်ကလေး မစ်ကီ တောင် အခု ငါ့အခန်းထဲ ပြောင်းလာပြီသိလား
ပူစီကတော့ တချိန်လုံး ငါ့အခန်းရှေ့ကနေ ကျားချောင်းချောင်းနေတာပေါ့
ငါကတော့ ဘယ်တော့မှ သူ့ကို အခန်းထဲ ပေးမဝင်ဘူး
ငါနဲ့ မစ်ကီပြောတဲ့စကားတွေ ကြားမှာစိုးလို့လေ
ကျောင်းဆင်းတိုင် နင်နဲ့ ငါ သွားသွားဆော့နေတဲ့ ပန်းဆိုင်လေးလေ
အဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင် အန်တီတောင် တလောကပဲ ဘေဘီလေး မွေးသေးတယ်
ဘေဘီလေးက ရယ်လိုက်ရင် နင်နဲ့သိပ်တူတာပဲ
ငါတော့ပန်းဆိုင်ကို ခဏခဏသွားပြီး ဘေဘီလေးကို ရယ်အောင် စစနေတော့တာပဲ။
ဖြူတုတ်ရေ ဖြေးဖြေးသွားပါဟ ငါမမီတော့ဘူး။
ခုတလော ကျောင်းမှာ ဆရာမ က ငါ့ကို အမြဲလိုလို….
“ကြိုးစားနော် သမီးစာတွေ လိုက်မမီတော့ဘူး” လို့ ပြောပြောနေတယ်။
တကယ်လို့ တခြားသူတွေက ရပ်မစောင့်ပေးဘူးဆိုရင် ငါက ဘယ်လိုလုပ် မီလာမှာလဲနော်။
ဒဲရစ်က နင့်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ ခရမ်းရောင်ယုန်ကြီးကို စီးပြီး တိမ်တွေထဲ တိုးဝင်သွားတယ်လို့ မက်တယ်တဲ့။
ပြီးတော့ ကောင်းကင်ထောင့်စွန်းမှာ လှပတဲ့ သက်တံ့ကြီးတခုပေါ်လာရောတဲ့။
ဒါပေမယ့် ခဏလေးပါပဲ၊ ခဏလဲနေရော ကောင်းကင်တခုလုံးအရောင်ပြောင်းပြီ
သူလဲ နောက်ကနေ ပြေးပြေးပြီးတော့ လိုက်တာပဲတဲ့
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပြေးပြေး နင်တို့ကိုတော့ လိုက်လို့ မမီဘူးတဲ့လေ။
မန်ဒီကလဲ ပြောသေးတယ်။ သူကျုရှင်က အပြန်ဆို နင်တို့ အိမ်ရှေ့ က အမြဲဖြတ်ပြန်ရတယ်တဲ့။
ဘယ်လောက်ပဲ နောက်ကျကျ နင့်အိပ်ခန်းလေးကတော့ အမြဲလိုလို မီးလင်းနေတာပဲတဲ့။
တခါတခါဆို နင် သိပ်ကြိုက်လို့ အမြဲလိုလို တီးတတ်တဲ့ ဆင်ဖိုနီ သံကိုတောင်ကြားရတယ်တဲ့။
ငါထင်တယ် အဲ့တာ နင့်မေမေ စန္ဒားယားတီးနေတာဖြစ်မယ်။
ခုထက်ထိကို ငါလမ်းတွေ ခဏခဏမှားနေတုံးပဲ။
“ငါတို့ လမ်းမှားမနေတာ သေချာရဲ့လား” လို့နင်အမြဲလိုလို ငါ့ကိုမေးတတ်တယ်လေ။
“လမ်းမှာတယ်ဆိုတာ လမ်းလျောက်တာရဲ့ တစိတ်တဒေသပါဟ” လို့ ငါက ဆရာကြီးလေသံနဲ့ အမြဲပြန်ပြောတတ်တာလေ။ နင်မှတ်မိသေးလား။
ခုထက်ထိလဲ ငါခဏခဏ လမ်းမှားနေတုံးပါပဲ။
လမ်းမကိုတော့ တယောက်ထဲ ကူးရဲပြီဟ။
ငါတိတ်တိတ်ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးလဲ ကျောင်းပြောင်းသွားပြီဟ။
သူကတော့ ငါ့ကို လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေ နောက်ထပ်တွေ့ဖြစ်ကြတော့မယ် မထင်ဘူး။
အရင်တုံးက ငါတို့နှစ်ယောက် အကသင်တန်းဆို သိပ်တက်ကြွကြတာလေ။
ခုတော့ နင်မရှိတော့ ငါ့မှာ ခဏခဏ စိတ်မပါဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။
လူကြီးတွေက ငါတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပျောက်ကွယ်သက်သာသွားမယ်ထင်နေတာ။
လူကြီးတွေက ငါတို့ ရယ်နေတာတွေ့ရင် အဲ့ဒီ နာကျင်မှုတွေ ကိုမေ့ကုန်ပြီထင်နေတာဟ။
ဘယ်တော့မှ မနာကျင်တတ်ဘူးလို့ ငါထင်ခဲ့တာဟ။
ခုတော့ တချို့လူတွေဟာ သူတို့ အနာကျင်ဆုံး အချိန်မှာတောင်
တခြားသူတွေကို ပျော်ရွှင်လာအောင် ကြိုးစားပေးတတ်တယ်ဆိုတာ
လေတွေကလဲ အရင်လို တိုက်နေတုံးပဲ။
နေမင်းကြီးလဲ နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ထွန်းလင်းနေတုံးပဲ။
ဒါပေမယ့် တချို့ ကိစ္စတွေကတော့ အရင်ကနဲ့ မတူတော့ပါဘူးဟာ……
အပူအပင်ကင်းတဲ့ အချိန်တွေကို ထာဝရ ရပ်ထားလို့ရရင်ကောင်းမယ်
စိတ်ညစ် ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေလဲ ထာဝရ ဝေးကွားနေရင် သိပ်ကောင်းမယ်
တခါတလေကျရင် ဘယ်သူမှ ရှာမတွေ့မယ့် ချောင်ကလောင်တခုထဲမှာ ပုန်းနေချင်မိတယ်
ပြီးတော့ ငါတယောက်ထဲ အဖော်မပါပဲ ကြီးပျင်းရမှာလဲ ကြောက်တယ်
အရွယ်ရောက်ပြီးပြီဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ပြန်လာလို့မရတော့ဘူး
တူတူပျော်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက မီးပန်းတွေနဲ့ တူတယ်
ကောင်းကင်တခုလုံးကို လှလှပပ ပြည့်စေပေမယ့်
လွမ်းရတဲ့ စိတ်ကကျတော့ သစ်စေ့နဲ့တူတယ်ဟ
ဒီနေ့က နင်တို့အိမ်ရဲ့ဆပ်ကပ်စ် ဒီနေရာမှာ ပွဲပြတာ နောက်ဆုံးနေ့လေ
ကျောင်းက ကလေးတတွေကတော့ ဆပ်ကပ်စ်အဖွဲ့ မိသားစုက ကလေးဖြစ်ရတဲ့ နင့်ကို သိပ်အားကျနေကြတာပေါ့
ဆပ်ကပ်စ်မိသားစု တခုရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် မိုက်ပြီး ဘယ်လောက်လန်းလိုက်သလဲနော်တဲ့
သူတို့ စိတ်ထဲမှာ နင်နေ့တိုင်း မိုမိုဆင်ကြီး ကိုစီးလို့ရတယ်ထင်နေတာ
ဒါပေမယ့် ဆင်ကြီးရဲ့ အီအီးတွေကျူံးရတာ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းသလဲ သူတို့မသိကြဘူးလေ။
ခွေးလေး ပါပီကတော့ အတော်ဆုံးပဲနော်။
ဂျွမ်းထိုးတတ်တယ် သင်္ချာလဲ တွက်တတ်တယ်။
ဘာမဆို အကုန်သင်လိုက်ရင် တတ်တာပဲ။
ဒါပေမယ့် သူက သိပ်မလိမ်မာဘူး။ နင့် အရုပ်တွေကို အမြဲ ကိုက်ပစ်တတ်တယ်။
ဖြူတုတ်လဲ ငါ့လိုပဲ သူ့ကို သတိရနေမှာပါ။
မြင်းကြီး ချီလီကတော့ အရင်ကအတိုင်းပဲ မျက်လုံးကြီး ပြူးထားပြီးတော့
ရှေ့ ခွာတွေနဲ့ မြေကို ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့
ငါတို့ဆီက ပန်းသီး တောင်းတောင်းစားတတ်တာလေ
ဘယ်လောက်ပဲ ကျွေးကျွေး သူကတော့ ဝတယ်ကိုမရှိဘူး။
အခုဆို သူလဲ တော်တော် ဝနေပြီလား မသိဘူးနော်။
နင့်အိမ်သားတွေကို မကြာခဏ လာကြည့်မယ်လို့ နင့်ကို ကတိပေးထားခဲ့ပေမယ့်
သူတို့နဲ့ တွေ့ရင် ဘာပြောရမလဲ မသိဘူးလေ။
ပြီးတော့ သူတို့ ကိုတွေ့လိုက်ရင် ငါအရမ်းငိုမိမှာ
နင်မရှိတော့တဲ့ နေ့ရက်တွေ တုံးက
သူတို့တွေဘယ်လို စိတ်တွေနဲ့ အပူရုပ်ကို ဟန်လုပ်ပြီး
ဆပ်ကပ်စ်ပွဲလာတဲ့ လူတွေကို ဖျော်ဖြေသလဲဆိုတာ
သူတို့ အားလုံးကလဲ ငါ့ကိုမြင်ရော ဝမ်းသာအားရ ပြေးဖက်ကြတာပဲ။
ငါတို့တွေ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် နဲ့ က ကြတာပေါ့။
ငါ့ကိုငါ နင့်နေရာ ရောက်နေသလို ခံစားရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတခါက ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ဝမ်းသာမျက်ရည်ချိုတွေပါ။
ဟိုမှာ ရစ်ကီတွေအများကြီး ကနေကြတာ တွေ့လား?
ခြင်္သေ့ဖေဖေကြီးရေ ရစ်ကီ့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အရုပ်ကလေး သမီးကို လက်ဆောင်ပေးတာ သိပ်ကျေးဇူးတင်တာပဲ။
ဆပ်ကပ်စ်ပွဲ ကတာကိုတော့ စောင့်မကြည့်နိုင်တော့ဘူး။
အိမ်ပြန်ရမယ့် လမ်းက အဝေးကြီးလေ။
ခြင်္သေ့ဖေဖေကြီးရေ နောက်နှစ် နွေဦးကျရင်
ငါတို့နှစ်ယောက်ထားခဲ့တဲ့ ကတိကို ငါဖြည့်ခဲ့ပြီ။
နင် လေပြေလေးပဲ ဖြစ်သွားသွား
ငါ့အနားမှာ အမြဲရှိနေခဲ့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(remembrance for my beloved friend Ricky,
even you are far far away you are always in our heart
may your soul rest in peace)
Posted on January 20, 2012 February 7, 2018 Categories Scattering thoughts, Uncategorized, Uncategorized, ပေးစာများ(letters), 幾米JimmyLeaveacomment on one more day with you
တောအုပ်လေးထဲက အိမ်လေး တလုံးမှာနေတယ်လို့ တွေးဖူးသလား။ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖူးသလား။ (စကားချပ်-မနှင်းဖြူလေးလိုတော့ လူပုလေး ၇ ယောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ စကားစပ်မိလို့ ကြုံတုံးပြောရရင်တော့ ဒစ်စနေရဲ့ မင်းသမီးတွေထဲမှာ စနိူးဝှိုက်ကို အမုန်းဆုံးပဲ။ သိပ်ရွတာပဲလို့ မြင်တယ်။ ထားတော့။)
ထားပါ။ ခုနက မေးတဲ့ မေးခွန်းက တီချမ်းမေးနေကျ ဆိုက်ကိုတက်စ် မေးခွန်းမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် လိုချင်တဲ့ နေချင်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အိမ်လေးမျိုး စိတ်ကူးယဉ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ ကတော့ တောအုပ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ တောင်ကုန်းအောက်လေးနားမှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ UP ကားတွန်းကားထဲက အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးလေးတွေလို တောင်စွန်းလေး နားက ရေတံခွန်လေးနားမှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ် မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် စမ်းချောင်းလေးဘေးမှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ နန်းညီ ပြောသလို ကြာဖြူ ကြာနီပေါက်နေတဲ့ မိုးကောင်းကင်ပြာပြာကျယ်ကျယ်အောက်က လယ်ကွင်းတွေပေါ်မှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ တီချမ်းလို ညောင်တုန်း အထွက်နားက ငါးကန်ကျယ်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ သစ်လုံးအိမ်ကလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ လှပတဲ့ သက်တံ့ရဲ့ အဆုံးက ရေကန်ငယ်လေးဘေးမှာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အိမ်လေးတလုံး ကိုယ်ပိုင်ရှိပြီဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နားနေစရာ ကွန်းခိုစရာ ဘဝအမောဖြေစရာနေရာလေးတခုတော့ ရှိပြီပေါ့။ ထပ်ပြီးလေလွင့်နေစရာမလိုတော့ဘူး၊ အချိန်တန်ရင် ပြန်စရာရှိပြီ။ နောက်ထပ်လဲ အထီးကျန်စရာမလိုတော့ဘူး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ တူတူခုချိန်ကစပြီး ဘဝကို တူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းလို့ရပြီပေါ့။
ဒါပေမယ့် လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးထဲက အိမ်ကလေးကိုလိုချင်တဲ့အချိန်၊ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အသက်အရွယ်တွေက တယောက်နဲ့တယောက် မတူကြဘူး။ တောအုပ်ထဲက အိမ်ကလေးတ တချို့ လူတွေအတွက် စိတ်ကူးသက်သက်ပေမယ့် တချို့ လူတွေအတွက်တော့ တကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ့် တားကက် ပစ်မှတ် တခုပဲ။ ဒါပေမယ့် လူ့ဘဝရဲ့ အရာတော်တော်များများ စိတ်ကူးထဲက အိမ်ကလေးအပါအဝင်က timing အခါအခွင့် နဲ့ ဆိုင်တာပါ။ တချို့လူတွေက လွတ်လပ်မှုကိုပဲ မြတ်နိူးတယ်၊ လေလွင့်နေရာတာကို ပျော်တယ်၊ အခြေတကျ မနေချင်ဘူး၊ သူတို့အတွက် အပင်တပင်သာရှိပါစေ၊ တောအုပ်တခုမလိုပါဘူး။ တောအုပ်ထဲက အိမ်မရှိလို့လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးပေါ့။ အပင်ရှိရင် အကိုင်းရှိမယ်၊ ခဏ နားပြီးရင် သူပျံချင်တဲ့နောက်တနေရာ ကို ဆက်ပျံလို့ရပြီပေါ့။
တချို့ ကကျတော့ ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်တဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့၊ ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်အတွက် သက်သက်ဖြစ်တဲ့ တောအုပ်ထဲက အိမ်ကလေးတလုံး လိုချင်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေလာလိုက်တာ တနေ့ကျတော့ သူလိုချင်တဲ့အရာတွေက အဲ့တာတွေမဟုတ်ဘူး၊ တောအုပ်ထဲက အိမ်လဲမဟုတ်ဘူး၊ ရေတံခွန်ဘေးက အိမ်လဲမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သေချာလာတဲ့ အချိန်ကျတော့ သူဟာဘာလဲဆိုတာ သူ့ဘာကို လိုချင်တာလဲဆိုတာ သူ့ကိုယ်သူတောင်မသိတော့သလို လမ်းပျောက်တတ်ပြန်ပါတယ်။ တူတူနေလာတာ နှစ်တွေကြာလွန်းလှတဲ့အခါကျတော့ သူ့မှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အဲ့တာတွေ အကုန်လုံး က တာဝန်တွေ ဝတ္တရားတွေအောက်မှာ မိသားစု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကြားမှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာကြာလှပြီ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေဟာ အထီးကျန်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘေးမှာ ကိုယ်ကချစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ မိသားစုဝန်းရံနေရင်တောင် အထီးကျန်နေတတ်ပါတယ်။ အရင်တုံးက သူလိုချင်တယ်ထင်ပြီး အသည်းအသန်ကြိုးစားခဲ့သမျှ ဟာ အခုတော့ သူ့အတွက် သူ့ကိုပြန်ချည်ထားမယ့် ကြိုးတွေသက်သက်သာဖြစ် လာခဲ့ပြီလေ။ သူလိုချင်တာ အခုချိန်မှာ အကိုင်းမှာ ခဏနားပြီး လွတ်လပ်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာ အဆုံးအစမရှိ အတောင်တွေကို ဖြန့်ပြီး ပျံသန်းနိုင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုမျိုးဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါ အရမ်းနောက်ကျနေပြီ။ သူ့ကိုချည်ထားတဲ့ကြိုးတွေ များလွန်းတာကြောင့် သူ့မှာ မလှုပ်သာ မရုန်းသာဖြစ်နေပြီ။ ငယ်ငယ်ကလို ခွန်အားလဲမရှိတော့ဘူး၊ အချိန်လဲ မရှိတော့ဘူး။
အရင်က ကြိုးစား တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တောအုပ်ထဲကအိမ်လေးကို ထားခဲ့ဖို့ကကျပြန်တော့လဲ ရင်ထဲမှာ အကြောက်တရားတွေက အပြည့်။ ဆက်လက်ဖက်တွယ်ထားဖို့ကျတော့လဲ အတွေးတွေက မရေရာ။ အချစ်တွေ မေတ္တာတွေ သံယောဇဉ်တွေဆိုတာ အမှတ်တခုကိုရောက်လာရင်တော့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာဆိုတာ ပြန်ရှာချင်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်မှုကို ပြန်လွမ်း တမ်း လာတာပေါ့လေ။ အဲ့လို အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်တို့တွေ အချစ်ကို လက်လွှတ်ခံပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တယ်ထင်တဲ့ လောက အသစ်တခုကို ရဖို့ ထပ်မံကြိုးစားမှုတွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ အရာရာကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးနိုင်သေးတာပဲ။ အီး လိုပြောရင်တော့ လွယ်လွယ်လေး တလုံးထဲ midlife crisis ပေါ့လေ။ (တီချမ်းက မရှုပ်ရှုပ်အောင်ရေးနေတာပါ)
တခါတခါကျရင် အရင်တုံးက နွေးနွေးထွေးထွေးနေခဲ့ရတဲ့ တောအုပ်ကအိမ်ကလေးကို သတိရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့တွေသွေးတွေချွေးတွေအများကြီးရင်းပြီး တည်ေ ဆာက်ထားတဲ့ ဘဝလေးလေး…..အဲ့လိုတွေးမိပြန်တော့လဲ ခွဲခွာရမှာ ခပ်ခက်ခက်ပဲမှလား။
ကိုယ်တို့တွေအချစ်ကနေပြီးတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ စောင့်စားမှုတွေ၊ ကတိတွေထားရှိခဲ့ကြတယ်။ ရလဲရ ခဲ့ကြ တယ်၊ နောက်ပြီး တို့နှစ်ယောက်တူတူနေကြတုံးက ရှိခဲ့ကြတဲ့ ပျော်စရာလေးတွေ ဒါတွေရှိနေရင် ဘဝကြီး ကမ္ဘာကြီးက ပြီးပြည့်စုံပြီလို့လဲထင်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ အသက်တွေ တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့မှ ပေါပေါလောလော သုံးခဲ့ကြတဲ့ နုပျိုမှုတွေက သိပ်မကျန်တော့ပါလားဆိုတာ အလန့်တကြားသိလာရတယ်လေ။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာ လုပ်ချင်တာကို လုပ်ဖို့ပေါ့။ သိဖို့ လဲလိုသေးတယ်လေနော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တောအုပ်ထဲက အိမ်လေးကတော့ “အိမ်ထောင်” လို့ဆိုရင်တောင် တချိန်တုံးကတော့ မင်းရောကိုယ်ရော ညွတ်နူးခဲ့ကြတဲ့ နွေးထွေးနေရာတခုပါပဲ။
ဘဝမှာ အသက် ၃၀ ရောက်ရင် လူတွေ ဒီလိုပဲ တောင်စဉ်ရေမရတွေ လျောက်တွေးပြီး ကြောင်လာသလားမသိဘူးနော်။ လိုချင်တာတွေ လုပ်ချင်တာတွေကလဲ မရေရာတော့ ကိုယ်ဘာလိုချင်သလဲဆိုတာလဲ ဝေဝေဝါးဝါး ရနေတာလဲ တကယ်လိုချင်တာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ဒွိဟတွေနဲ့ အော်………တောအုပ်က အိမ်ကလေး။ ကိုယ့်ရဲ့ တောအုပ်က အိမ်ကလေး။
Posted on January 17, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါး1 Comment on တောအုပ်လေးထဲက အိမ်……
When I am 30…. I will be halfaman I will have halfaway I will be half grown I will be half educated
When I am 30 I will be half settled I will be half succeed I will be half believed I will have half belief
When I am 30 I will be half asleep I will be half awake I will be half planned I will be half dreamed
From now on I will be startastep I will be startaplan I will be my own boss I will be my own freedom
Hey life…. Are you ready? Ready or not? Here I come!
ကျတော် ၃၀ ပြည့်တဲ့အခါ…
ကျတော် ၃၀ ပြည့်တဲ့အခါ
A Chen2:19PMMonday16th Jan 2012Bangkok
Posted on January 16, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ2 Comments on When i am thirty
ဘာကို မနာလိုတာလဲ…? ဒါမှ မဟုတ် မင်းအတွက်တော့ ဟာသ ကိုယ့်အတွက်တော့ ပူလောင်ပြင်းပျတဲ့ မနာလိုမှုတွေလား၊ ဥပမာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားသူတွေနဲ့ မင်းရဲ့ဆက်ဆံမှု၊ သူတို့ အပေါ်မင်း အကြည့်၊ တယောက်ယောက်ကို မဟုတ်ဘဲနဲ့ မင်းရဲ့ ကာဆင်ပါလို့ လိမ်ညာမှုတွေ၊ မင်းရဲ့ စကားပြောတဲ့ အခါ မလုံမလဲ ဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအယာ၊ ကိုယ့်မျက်လုံးတည့်တည့် မကြည့်ရဲတာတွေ စသဖြင့်ပေါ့။
ကိုယ်ထင်တယ် လူတွေ မနာလိုစိတ်ကို ဝန်မခံချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ တခြားအကြောင်းပြချက်တွေလဲ ရှိနေနိုင်သေးတယ်။ ဥပမာ….ကိုယ်မင်းကို ဘယ်လောက်ချစ်တာ၊ ဘယ်လောက်အလေးထားတာ၊ ဆုံးရှုံးရမှာ ဘယ်လောက်ကြောက်တာ ဆိုတာတွေကို မင်းကိုမသိစေချင်ဘူး။
Posted on January 16, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါ3း Comments on ဝန်ခံရန်ခက်ခဲသော…
ဒီရက်ပိုင်းမှာ တကယ့်ကိုပဲ လွယ်လွယ်ချက် ဆူဆူစားတွေ လုပ်နေမိပါတယ်။ အမဲသားဆီပျံ တအိုးချက်ပြီး ၃ ရက်လောက်စားတာမျိုး၊ အလွယ်တကူ ပလာချောင်ကြော် ဆတ်သားမွကြော်တွေနဲ့ ထမင်းပူပူ စားလိုက်တာမျိုး ဒီလိုပဲ ပြီးနေတာ များပါတယ်။ အရင်တပတ်က ရုံးပြန်တက်ရတယ်။ မြန်မာပြည်ကလဲပြန်ရောက်တာ မကြာသေးတော့ အရှိန်ကမသေသေးပါဘူး။ ထားတော့။
ကဲဒီတခါလဲ လွယ်လွယ်ချက်တာ စားကြရအောင် ဖက်ထုပ်ပြုတ်လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အပေါ်က ပုံမှာ ပြထားသလိုပဲ ဖက်ထုပ်ထုပ်ရပါမယ်။
ပထမဆုံး အသားတောက်တောက်စင်း ကို လိုချင်သလောက် ဆား အချိုမှုန့် ကော်မှုန့် တို့နဲ့ နယ်ပေးပါ။ နယ်ပြီးသားတွေကို ပုံ ၂ က အတိုင်း ဗူးလေးနဲ့ ထည့်ထားပါ။ ပိုနေရင် ပြန်သိမ်းရလွယ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် ပုံ ၃ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရေခွက် လေးနဲ့ တူလေး တချောင်းဆိုရင် ဖက်ထုပ်စထုပ်လို့ ရပါပြီ။ အမှန်က ရေခွက်အစား ကြက်ဥ အကာ ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အသားနယ်တဲ့ အထဲမှာလဲ ကြက်ဥ တလုံးလောက်ထည့်နယ်ရင် ပိုစားကောင်းပါတယ်။ အသားက ပိုနူးညံ့တာပေါ့။ အိမ်သားက ကြက်ဥ မစားတော့ မထည့်ရပါဘူး။
ဖက်ထုပ်အသားအတွက်ကတော့ အလွယ်လုပ်ပြီးသားကို ဈေးမှာ ဆိုင်တွေမှာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဟိုးတီတို့ အမေတွေ ခေတ်ကလို အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ် စရာမလိုတော့ပါဘူး။ တီကတော့ အခု ပုံမှာ ပြထားတဲ့ မြင်းဖြူ တံဆိပ်ကို ဝယ်ပါတယ်။ မေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။ ဖက်ထုပ် ပြုတ်မယ့်ဟာလို့ပြောပါ ကြော်မယ်ဟာ နဲ့ ပြုတ်မယ့်ဟာချင်း ဖက်ထုပ်ရဲ့ အသားမတူပါဘူး။ အဲ့တော့ မသေချာရင် မေးဝယ်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းထုပ်ပါ။ တီကတော့ ထုပ်ပြီး လှလှလေး ဖြန့်ထားပါတယ်။ ခဏလှပ်ထားတာပါ။ နောက် တော့ ပိုတာ ကို ဗူးထဲ ထည့်သိမ်းပေါ့။ နောင်နေ့ စားရင် ထပ်ထုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလေနော်။
ဖက်ထုပ်ထုပ်ပြီးရင် ပြုတ်ပါမယ်။ ရေတအိုးအရင်ဆူအောင်တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် စားချင်သလောက် ပြုတ်ပါ။ တီကတော့ တပွဲအတွက် ကို ဖက်ထုပ် ၁၀ ခု ပြုတ်ပါတယ်။ အိုးထဲက ရေဆူလာရင် ဖက်ထုပ်တွေထည့်ပါ။ ပြီးတော့ ခဏ ပေးဆူလိုက်ပါ။ ဖက်ထုပ်တွေ ထည့်ထည့်ချင်း ရေက အေးသွားပါမယ်။ ဖက်ထုပ်တွေကလဲ အောက်ကို ကျသွားပါမယ်။ ခဏနေလို့ ကျက်လာရင် သူတို့တွေက မုန့်လုံးရေပေါ် လိုပဲ ပေါ်လာပါမယ်။ ခဏ ထပ်ပေးဆူလိုက်ပါ။ တီက ဖက်ထုပ်ထဲ ကို အသားများများထည့်ထားလို့ နည်းနည်း ကြာကြာလေး ပြုတ်ပါမယ်။ မဟုတ်ရင် အထဲက အသားမကျက်မှာ စိုးလို့ပါ။ ကပ်စေးနည်းပြီး အသားကို ဆိုင်မှာလို နည်းနည်းလေးပဲ ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေပေါ် ပေါ်လာတာနဲ့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် စားမယ့် ပန်းကန်ထဲ ဖက်ထုပ်တွေကို ရေစစ်ပြီးထည့်ပါ။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ အသားတွေက ဟင်းရည် ကြည်ထဲက အသားကို အချောင်းလေးတွေ ဖြစ်အောင်လှီးထားတာပါ။ အိုကေ အောက်မှာ ဟင်းရည်ကြည်ကိုကြည့်ရအောင်….
ရေကို ကြိုက်သလောက် အိုးနဲ့ ထည့်တည်ပါ။ အရသာ လေးလေးလိုချင်ရင် ရေနည်းနည်းနဲ့အသားများများ သို့ နံရိုး၊ သို့ အရိုးကြမ်း စတာတွေနဲ့လဲ ဟင်းရည်ကို ချိုအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ တည်ပုံတည်နည်းကတော့ ပြောလွန်းလို့ ဖန်တရာတေ ဆိုသလိုပါပဲ။ ပထမဆုံး ကြိုက်သလောက် အသား အရိုးကို ရေစင်စင်ဆေးပြီးတော့ တည်မယ့်အိုးထဲထည့်ပါ။ တီကတော့ ပုံမှာ ပြထားသလောက် ရေကို ပုံမှာ ပြထားသလောက် အသားတုံးနဲ့ ဆို အိုကေပါတယ်။ ပထမဆုံး မီးပြင်းနဲ့ ရေဆူတဲ့အထိတည်ပါ။ အိုးအဖုံးကို တည်နေတဲ့ တချိန်လုံးဖွင့်ထားပါ။ ပထမဆုံးရေ တဖြည်းဖြည်းပူလာရင် အသား ထဲကသွေးတွေကြောင့်ရေတွေက နည်းနည်းနောက်လာပါမယ်။ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ မပူပါနဲ့။ ပြီးရင် ရေဆူလာပြီဆိုတာနဲ့ မီးကို အေးပစ်လိုက်ပါ။ မီးသေးလေးနဲ့ ဆက်တည်ပါ။ ဟင်းရည်က တဖြည်းဖြည်း ကြည်လာပါမယ်။ တည်နေတဲ့တလျောက်မှာ အနှစ်ဖြူဖြူ တွေပုံ ၁ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းတွေ့ရင် ဇွန်းလေးနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ခပ်ထုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ ပုံ ၃ မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း တီချမ်း တို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ မဟာဟင်းရည်ကြည် ကိုရပါမယ်။
ဟင်းရည်ကြည်လဲ ရပြီ ဖက်ထုပ်လဲ ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ခုနက ဖက်ထုပ်ကို စစ်ပြီးထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်ထဲကို ဆား အချိုမှုန့် လိုသလောက်ထည့်ပါ။ ခုနက ဟင်းရည်ကြည်ထဲက အသားကို အချောင်းလေးတွေလှီးပါ။ ပြီးရင် ဟိုတနေ့က ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုတ်သီး ဆီချက်တွေထည့်ဖို့လဲ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ပြီးရင် နံနံပင်ထည့်၊ အချဉ် ညှစ်ပြီးရင် ဟင်းရည်ကြည်လေး လောင်းထည့်လိုက်တော့ လွယ်လွယ်ကူကူ စားစရာ တီချမ်းချက်တဲ့ ဖက်ထုပ်ပါ ဆိုသလို ဖက်ထုပ်ပြုတ် ကောင်းကောင်း အရသာရှိရှိလေးတပွဲ ရတာပေါ့နော်။
အောက်ကဟာတွေကတော့ ဖက်ထုပ်နဲ့ မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့ တီချမ်း မဟာဗိုက်အတွက် ထပ်မံဖြည့်တင်းရတဲ့ သံပရာသီးနဲ့ပျားရည် နဲ့ဖျော်တာရယ် ငါးရံ့ဖုတ်ဆီဆမ်းနဲ့ ရေနွေးကြမ်းရယ်ပါ။ အချိုပွဲပေါ့။ မြည်းကြပါအုံး။
နောက်က ၃၂ လက်မ တီဗီမှာ ပြနေတာ ဘာကားလဲ? ဖြေနိုင်တဲ့သူ ကို ငါးရံ့ခြောက်တဗူးလုံးပေးမယ်။
နောက် တီ ဒီပိုစ့်ထဲမှာ အလွဲလေးတုခုရှိတယ်။ ဘယ်သူမျက်စိလျင်လဲ ကြည့်ရအောင်နော်။
Posted on January 15, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ခေါက်ဆွဲ9 Comments on တီချမ်း ဖက်ထုပ်ပြုတ်
တချို့ယောက်ျားတွေ ရှိပါတယ်…..လူက လူဆိုးမဟုတ်ဘူး၊ ပုံစံက အမိုက်စားမဟုတ်ဘူး၊ အဲ့လိုပဲ ငတုံးငအ လဲမဟုတ်ပြန်ဘူး၊ ဂုဏ်မောက်ပြီး မာန်တက်နေတာမျိုးလဲမရှိဘူး………..တခုပဲ သူ့ကမ္ဘာက ကျဉ်းလိုတယ်။ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးကိုမဆို ပေါ့ပေါ့လေးပဲ တွေးတယ် မြင်တယ် လုပ်တတ်တယ်။
တခြားလူတွေ လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုဆို ဒီလိုပါပဲ လို့အမြဲမြင်တတ်တယ်။ သူလုပ်မှ သူများထက်ပိုကောင်းတယ်လို့အမြဲ ထင်တတ်တယ်။ ဆင်ခြေဆင်လက်သိပ်များတယ်။ လူဖြစ်ရတာ သူ့အတွက် ဘာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှ မရှိသလိုဘဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာ တာဝန်ယူမှု ဆိုတာလဲမရှိလို့။ သူများအပေါ် မကောင်းကြံတတ်တာမျိုးတော့လဲ မရှိဘူး၊ သူများကိုလဲမကောင်းမကြံတတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုပဲ သူများအပေါ်မှာလဲ မကူညီတတ်သလို သူများအတွက် စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလဲ သူ့မှာ မရှိပါဘူး။
သူ့ကမ္ဘာမှာ သူရဲ့ နေ့တဓူဝ ဖြတ်သန်းမှု နဲ့ ဘဏ်ကောင့်ထဲက ဆုငွေတွေပဲ ရှိတယ်။ သူက ဘယ်လုိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူက စက်ဝိုင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတခု ဆွဲလိုက်တယ်။ ကွက်ကွက်ကလေးမှ တကယ့်ကို ကွက်ကွက်ကလေးပဲ။ အဲ့စက်ဝိုင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကနေ ဘယ်တော့မှ မထွက်တော့ဘူး၊ ထွက်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်လဲ မရှိဘူး။
ယောက်ျားတယောက်ကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့လဲ မမေးပါနဲ့။ ယောက်ျားဆိုတာ နားလည်လို့ရတဲ့ သတ္တဝါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တို့က သူတို့ ကို ကြိုက်တိုင်းလဲ သူတို့က ကိုယ်တို့ကို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်တကယ်ကို တယောက်ယောက်ကို နားလည်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ ပိုကျယ်တဲ့ ယောက်ျားတယောက်လောက်ကိုသာရှာပါလေ။
သူက ယောက်ျားတံခွန် လူရည်ချွန်ဖြစ်စရာမလိုသလို၊ သူရဲကောင်း တယောက်လဲဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းတယောက်တော့ ဖြစ်ဖို့ လိုမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ကွက်ကွက်ကလေးထက် သူ့မှာ ကျယ်ပြောတဲ့ အတိုင်းအဆမဲ့ ကောင်းကင်တခုရှိရမယ်။
သူများတွေမှာ ရှိတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ၊ အားထုတ်မှုတွေကို နားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့ ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်ရမယ်၊ သူများတွေလဲ အောင်မြင်နိုင်တယ်၊ ကံကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကို နားလည်လက်ခံနိုင်ရမယ်။ လောက ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လောက်ကျယ်ပြောပြီး လူသားတွေက ဘယ်လောက်သေးငယ်သလဲဆိုတာ သိရမယ်။
တာဝန်ယူမှုဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ရမယ်၊ ယူရဲရမယ်။ သိတတ်တဲ့ စိတ်ရှိရမယ်။ အလုပ်တခုလုပ်တဲ့နေရာမှာ သူများအတွက်ဆုိုတာကိုလဲ စဉ်းစားပေးတတ်ရမယ်။ နားလည်မှု ရှိတဲ့ စိတ်ထားတခု ရှိရမယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တချိန်လုံး လူတွေကို လိုက်တွက်ကပ်နေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ အရေးမပါတဲ့ အလုပ်သေးသေးလေးတွေမှာ အချိန်ကုန်နေတာမျိုးလဲမဖြစ်ရဘူး။ ဘေးထိုင်ဘုပြောတဲ့ လူမျိုး ပိုပြီးတော့ မဖြစ်ရဘူး။ သူများအပေါ်မကောင်းကြံချင်တဲ့သူမျိုး။ အမြတ်ထုတ်ချင်တဲ့ သူများလဲ မဖြစ်ရဘူး။ ဘဝက ခါးသီးလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဖောက်ဖျက်တဲ့ အလုပ်မျိုးလုပ်တဲ့သူလဲ မဖြစ်ရဘူး။
အရမ်းတော်နေ တတ်နေ ဖို့မလိုပါဘူး။ တိုးတက်မှုအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိဖို့လဲမလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် တိုးတက်ချင်စိတ်တော့ရှိရပါမယ်။
ကမ္ဘာကျယ်တဲ့ ယောက်ျားတယောက်ကို ရှာချစ်မှ ကိုယ်တိုင်လဲသူနဲ့အတူတူ လိုက်ဘက်ညီတဲ့ ကျယ်ပြောတဲ့ ပင်လယ် ဖြစ်မှာပေါ့။ ကမ္ဘာကျဉ်းတဲ့ ယောက်ျားတယောက်ကို ချစ်မိရင်တော့ ကိုယ်လဲ မတိုးတက်တဲ့ အပြင် သူနဲ့ လိုက်ပြီးတော့တောင် ဆုတ်ယုတ်နိုင်သေးတယ်။
Posted on January 13, 2012 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆောင်းပါ6း Comments on ယောက်ျားတွေရဲ့ ကမ္ဘာ